Shina EU- CE serivisy sy fitsapana |MCM
▍ Inona no atao hoe fanamarinana CE?
Ny marika CE dia "pasipaoro" ho an'ny vokatra hiditra amin'ny tsenan'ny EU sy ny tsenan'ny EU Free Trade Association.Izay vokatra voatondro (tafiditra amin'ny torolàlana fomba vaovao), na vokarina any ivelan'ny Vondrona Eoropeana na any amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, mba hivezivezy malalaka ao amin'ny tsenan'ny Vondrona Eropeana, dia tsy maintsy manaraka ny fepetra takian'ny torolàlana sy ny fenitra mifanaraka amin'izany izy ireo alohan'ny hanaovana azy. napetraka eo amin'ny tsenan'ny EU, ary apetaho ny marika CE.Fepetra takiana amin'ny lalànan'ny Vondrona Eoropeana momba ny vokatra mifandraika izany, izay manome fenitra ara-teknika farany ambany indrindra amin'ny varotra vokatra any amin'ny firenena samihafa eo amin'ny tsena Eoropeana ary manamora ny fomba fiasa ara-barotra.
▍ Inona no atao hoe torolàlana CE?
Ny toromarika dia antontan-taratasy ara-dalàna napetraky ny Filankevitry ny Vondrom-piarahamonina Eoropeana sy ny Vaomiera Eoropeana eo ambany fanomezan-dàlanany Fifanarahana Vondrona Eoropeana.Ny torolàlana azo ampiharina amin'ny bateria dia:
2006/66 / EC & 2013/56 / EU: Torolàlana momba ny bateria.Ny bateria manaraka ity torolàlana ity dia tsy maintsy misy marika fanariam-pako;
2014/30 / EU: Directive Compatibility Electromagnetic (EMC Directive).Ny bateria manaraka ity torolàlana ity dia tsy maintsy manana marika CE;
2011/65 / EU: torolàlana ROHS.Ny bateria manaraka ity torolàlana ity dia tsy maintsy manana marika CE;
Soso-kevitra: Rehefa manaraka ny torolàlana CE rehetra ny vokatra iray (mila apetaka ny marika CE), vao azo apetaka ny marika CE rehefa feno ny fepetra rehetra amin'ny torolàlana.
▍Ilaina ny fangatahana fanamarinana CE
Izay vokatra avy amin'ny firenena samihafa te-hiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny Zone Trade Free Eropeana dia tsy maintsy mihatra amin'ny CE-certificat sy CE voamarika amin'ny vokatra.Noho izany, ny fanamarinana CE dia pasipaoro ho an'ny vokatra miditra ao amin'ny Vondrona Eropeana sy ny Zone Trade Free Eropeana.
▍ Tombontsoa amin'ny fangatahana fanamarinana CE
1. Ny lalànan'ny Vondrona Eoropeana, ny fitsipika ary ny fenitry ny fandrindrana dia tsy vitan'ny hoe be dia be, fa sarotra ihany koa ny votoatiny.Noho izany, ny fahazoana ny mari-pankasitrahana CE dia safidy tena hendry mba hitsitsiana fotoana sy ezaka ary hampihenana ny risika;
2. Ny taratasy fanamarinana CE dia afaka manampy amin'ny fahazoana ny fitokisan'ny mpanjifa sy ny andrim-panjakana manara-maso ny tsena amin'ny ankapobeny;
3. Afaka misoroka tsara ny toe-javatra iampangana tsy tompon'andraikitra;
4. Eo anatrehan'ny fitsarana dia ho lasa porofo ara-teknika manan-kery ara-dalàna ny fanamarinana CE;
5. Rehefa voasazy avy amin'ireo firenena ao amin'ny Vondrona Eoropeana, dia hiara-hiasa amin'ny orinasa ny fikambanana fanamarinana, ka hampihena ny loza ateraky ny orinasa.
● Ny MCM dia manana ekipa teknika miaraka amin'ny matihanina mihoatra ny 20 mirotsaka amin'ny sehatry ny batterie CE certification, izay manome vaovao momba ny fanamarinana CE haingana kokoa sy marina kokoa ary farany;
● MCM dia manome vahaolana CE isan-karazany ao anatin'izany ny LVD, EMC, torolàlana momba ny bateria, sns. ho an'ny mpanjifa;
● Ny MCM dia nanome fitsapana CE bateria maherin'ny 4000 eran-tany hatramin'izao.
teo aloha: Amerika- WERCSmart
Manaraka: Sina- CQC
Inona no Certificat
Ity Certification ity
Ity Price Certification ity
Ity fomba fanamarinana ity
Serivisy fanamarinana Ce
Ity Citation ity
Inona no tatitra
Ity fepetra ity
Ity Specification ity
Ireo antontan-taratasy ara-teknika
Ce fepetra ara-teknika
Fitsapana re izany
Ity zavatra fitsapana ity
Ce fomba fitsapana
Ity tatitra fitsapana ity
Inona no Fitsapana
Laboratory Testing Ce
Vidin'ny fitsapana ity
Ity serivisy fitiliana ity